I-English Montreal School Board (EMSB) - iBLI Isikole solimi eCanada
Izinhlelo zePathwayIbhodi Yezikole ZaseMontreal yesiNgisi
Indlela yakho eya eCanadaIbhodi Yezikole ZaseMontreal yesiNgisi
Njengoba kunabafundi abangaphezu kuka-44,000, i-English Montreal School Board (EMSB) iyibhodi lesikole sikhulu samaNgisi esiQuebec. Isungulwe ngoJulayi 1998, lapho isifundazwe sakha amabhodi amasha emigqeni yolimi, inethiwekhi yayo iqukethe Izikole ezingama-77 nezikhungo. Kukhethiwe umkhandlu wabakhomishani eqondisa izindaba ze-EMSB. Le nhlangano enamalungu ayi-11 yengamele isabelomali esingaphezu kwezigidi ezingama- $ 350. Izimali zihlinzekwa ngemali eyisibonelelo evela kuhulumeni wesifundazwe, futhi, ngezinga elincane, ngentela yezikole zasekhaya. Izikole ze-EMSB nezikhungo zisebenza ngokubambisana amabhodi alawulayo, enziwe isibalo esilinganayo sabazali nabasebenzi, kanye nothishanhloko noma umphathi wesikhungo. Ngaphezu kwalokho, abamele umphakathi kanye nabafundi ku umjikelezo wesibili wesikole esiphakeme bangamalungu ebhodi ebusayo, kepha abanalungelo lokuvota. Kukhona ne IKomidi Labazali le-EMSB.
Injongo ye-English Montreal School Board ukusekela izikole zayo nezikhungo emizamweni yazo yokufundisa abafundi emphakathini wokufunda onakekelayo, ophephile futhi obandakanya bonke abafundi.
Ukufeza umsebenzi wayo i-EMSB izokwenza:
Qaphela futhi ubonge ukwehlukahluka komphakathi wawo
Nikeza bonke abafundi ithuba lokuthuthukisa amathalente abo futhi bazuze okusemandleni abo
Yazi amakhono nekhono labasebenzi bayo futhi usekele ukuthuthukiswa kwabo kobungcweti okuqhubekayo
Khuthaza ukusebenzisana phakathi kwabalingani bezemfundo abahlukahlukene
Sebenzisa izinsiza kusebenza ngempumelelo nangendlela encomekayo ukusiza izikole nezikhungo ukuthi zigxile ekuthunyelweni kokufundiswa, ezokuhlalisana kwabantu, kanye neziqu
Khuthaza ukufunda impilo yonke nokucabanga okubucayi
Ibhodi Yezikole ZaseMontreal yesiNgisiOlunye ulwazi
Ukupheka Kobungcweti Nokungenisa Izihambi
Uhlelo lweProfessional Cooking lungiselela abafundi ukuthi bazilolonge ngokuhweba kompheki ochwepheshe.
Ngokuvamile, abapheki abaqeqeshiwe benza imisebenzi ehlobene nokulungiselela, ukuguqula, ukukhonza nokugcina ukudla. Baqashwa ezindaweni zokudlela, emahhotela, ezibhedlela, ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo, kumaphakathi nokudla, ezikhungweni zemfundo nakwezinye izikhungo. Bangaphinde basebenze emikhunjini, kwiziza zokwakha, kubafundisi, okokukhiqiza ukudla, njll. Ngezinye izikhathi basebenza ngaphansi kwegunya lompheki.
Isikhathi sohlelo singamahora angama-1 470, okubandakanya amahora angama-930 asetshenziselwe amakhono athile adingekayo ukwenza umsebenzi wokuhweba noma wokusebenza kanye namahora angama-540 ngobuchule obuhlobene nomsebenzi. Uhlelo lokufunda luhlukaniswe ngamakhono angama-24 ahlukene ngobude ukusuka emahoreni angama-30 kuye kwangama-135. Amahora aphelele abelwe uhlelo afaka isikhathi esichithwa ekufundiseni, ekuhlolweni kokufunda nokukhulisa noma imisebenzi yokulungisa.
Izinsizakalo Zokudla Neziphuzo
Ukunquma ukufanelekela kwabo umsebenzi nenqubo yokuqeqesha, ukusebenzisa indlela egxile kumakhasimende, ukulungiselela imise indawo enendawo yokudlela, ukuchaza amamenyu nezitsha, ukuthatha nokwenza inqubo yama-oda, ukuthola nokunikeza imininingwane ngesiFulentshi, ukwenza imisebenzi yokukhokhisa nokuqoqa, ukuncoma nokuhlinzekela amawayini, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuphuza, ukuhlinzeka ngomsebenzi wedili, ukuhlinzeka ngemisebenzi engekho emthethweni, ukuhlinzeka ngemisebenzi esemthethweni, kanye nokuzibandakanya emsebenzini.
IZIMPAWU ZE-AUTOMATED SYSTEMS ElectronicsROMECHANICS
Zuza ulwazi, amandla kanye nesimo sengqondo esidingekayo sokuqinisekisa ukusebenza nokugcinwa kwemishini yokukhiqiza ezenzakalelayo ngaso sonke lesi sikhathi ngokuhlonipha ushintsho lwekhwalithi nezobuchwepheshe, ukuxazulula inkinga, ukulungisa amasistimu ahlukene nezingxenye, ama-hydraulics, ama-pneumatics, amasekethe kagesi nawe-elekthronikhi, asebenza ezinkampanini ezahlukahlukene ezisebenzisa i-automated izinhlelo.
INDAWO YOKUGQIBELA (CAD)
Ukuthuthukisa amakhono adingekayo ukuthola imininingwane ozoyifaka kwimidwebo, njengoku: ukuxazulula izinkinga ezihlobene nokuklanywa kwezimboni, ukuthatha nokutolika izilinganiso; athuthukise amakhono adingekayo ukuqonda izimboni, njengoku: ukutolika imininingwane yezobuchwepheshe ehlobene nezinto zokwenziwa nezinqubo zokwenziwa, okubonisa ukuhlelwa kwezakhi nezinhlelo zesitimela samandla; ukuthuthukisa amakhono adingekayo ukuhumusha, ukufeza, nokulungisa imidwebo nokukhiqiza imidwebo, ukusebenzisa imisebenzi ekhethekile yohlelo lokudalwa ngokusizwa yi-computer, ukukhiqiza imidwebo yemininingwane yezakhi zemishini, umhlangano, izindlela, ukufaka amapayipi kanye nemidwebo yesekethe, enza ezintathu- imidwebo yobukhulu nokuklama into elula yobuchwepheshe; ukuthuthukisa amakhono adingekayo womsebenzi wethimba eliqondisa izigwegwe futhi uhlanganyele esikoleni nempilo yomsebenzi.
Ukuthuthukisa izitshudeni amakhono ayisisekelo adingekayo ukufeza imisebenzi yemishini, ukwenza imisebenzi yemishini kumathuluzi ejwayelekile womshini, ukwenza imisebenzi yohlelo, ukwenza imisebenzi yokwenza amathuluzi kumishini yokulawula izinombolo, ukubamba iqhaza ngenkuthalo emaqenjini ahlukahlukene futhi kuhlanganiswe ngokuvumelanayo isikole nendawo yokusebenza.
Abaqambi bemifanekiso yamakhompiyutha basebenzela izinkampani ezisebenza emkhakheni wezokuxhumana ngama-graphic, i-multimedia kanye nemikhakha yezinkampani, ezifaka omagazini, amaphephandaba, izinkampani zokufaka, abenzi beminye imikhiqizo yokuphrinta, abakhiqizi beWebhusayithi kanye nabakhiqizi bemikhiqizo kagesi. Abaqambi bezithombe ze-Computer nabo bangazisebenza.
Bakhiqiza izifanekiso zokwakheka zamakhasi futhi bakhe ukwakheka kwamakhasi. Umsebenzi wabo ufaka ukucubungula izithombe nombhalo, uzifake kwizakhiwo zamakhasi futhi ulungiselele izakhiwo zokuphrinta nokusatshalaliswa kwemultimedia ngenkathi uqinisekisa ukuthi ziyahlangabezana nezindinganiso zokusabalalisa zobuchwepheshe.
UKUHLELWA KAKHULU NOKUPHAKATHI
Funda zonke izici zohwebo lokuphrinta kusuka ekuhlelweni kwamakhompiyutha kuye ekusetshenzisweni kokusebenza komshini wokushicilela nesikrini kanye namasu wokuqedela nokubopha. Thola okuhlangenwe nakho kwakho okuzokunikeza umsebenzi. Lapho usuqedile, ukuqonda kwakho yonke inqubo yokuphrinta, ukulungiswa kwemishini, iphepha, inks, ifilimu, ukukhumula kanye nesoftware yesicelo kuzokuvumela ukuthi ungene emhlabeni wokuphrinta ngokuzethemba.
UKUQINISEKISA NGOKUHAMBELA NEZOKUthengisa
Uhlelo lwe-Travel Consulting and Sales luhlose ukuqeqesha ababonisi bezentengiso zokuhamba. Umsebenzi uqukethe ukuxhumana namakhasimende, ukunquma izidingo nokulindelwe nokuchaza ukunikezwa kohambo nezinsizakalo ze-ejensi. Umxhumanisi uzokwazi ukunikeza imininingwane ngezindawo, izindlela zokuhamba, indawo yokuhlala nezindleko ezihambisana nakho konke ngenhloso yokuthengisa imikhiqizo nezinsizakalo zokuhamba. Umxhumanisi uzokwenza imisebenzi yokuphatha efana nokubhuka, ukukhokhisa kanye nokuxhumanisa inkokhelo yemikhiqizo ethengiwe nokulungisa amadokhumenti okuhamba. Kulindeleke amakhono amahle kakhulu okusiza amakhasimende.
Umeluleki kulindeleke ukuthi athengise amaphakethe okuhamba kanye nemikhiqizo yokuhamba eyenziwe ngokwezifiso (efana nelanga, amasiko, impilo, i-adventure, ezemidlalo, imvelo, njll. Izindawo), uhambo olwandle, lwebhizinisi nezinhlelo zabavakashi. Uzohlinzeka nangamaphakethe okuhamba nawokulala, nomshuwalense wokuhamba. Ububanzi bemikhiqizo yokuhamba nezinsizakalo ezihlongozwe ama-ejensi buvela ngokuphelele.
Indima yomeluleki wokuhamba futhi iqukethe ukwazisa iklayenti ngemibandela yokuhamba efana nezidingo zokungena nokuphuma ezweni, imali yakwamanye amazwe kanye namanani wokushintshanisa, ukuphepha kwabahambi, njll.
Ukuthuthukisa amakhono adingekayo wokuqedela imisebenzi ye-accounting enjengokuthi: ukubala nokulungisa izikweletu, ama-invoice, amaresidi, izinkokhelo, njll. Yebhizinisi, ukuphatha ukheshi omncane, ukukhiqiza imali ekhokhwayo, ukubala amanani, ukuqeda ngokunembile futhi qinisekisa umsebenzi wemisebenzi yokubala imali yansuku zonke, ukuqeda ukuphela kwesikhathi sezimali nokuphela kwemisebenzi yonyaka, ukhiqize amafomu entela engenayo, futhi udale uhlelo lokubalwa kwezimali.
Ukuthuthukisa izitshudeni amakhono adingekayo ukusebenzisa lezi zimiso, imithetho nezindlela ezilandelayo: hlanganisa ngokuhlangana esikoleni nezindawo zomsebenzi; ukufundisisa imibhalo yamabhizinisi; ukusebenzisa inqubo yokubeka ikhibhodi; ukuphatha imininingwane yokuphatha; ukuqonda kanye nokuthola izindlela ezahlukahlukene zokuphatha ezisezingeni; ukuphatha isikhathi sabo; ukuklama ifomethi yombhalo; ukubhala izincwadi zebhizinisi; ukusebenzisa isoftware yedatha; ukusebenzisa imisebenzi eyisisekelo yesoftware yokuhlonza amagama; ukusebenzisa imisebenzi eyisisekelo yesoftware yespredishithi; ukusebenzisa umsebenzi othuthukile wesoftware yokuhlonza amagama; ukusebenzisa amathuluzi wokuxhumana ngocingo; ukuxhumana nebhizinisi endaweni ethile yamahhovisi; ukuphatha ukuxhumana ngezilimi ezimbili esimweni sehhovisi; ukukhiqiza nokwamukela izincwadi zebhizinisi; ukukhiqiza amadokhumenti; ukuphatha izicelo eziphathelene nemithetho yezabasebenzi; ukuvuselela amafayela; ukulungiselela imihlangano yebhizinisi; ukwenza imisebenzi ejwayelekile neyenziwa ngezikhathi zokubalwa kwezimali; ukukhiqiza ukuxhumana ngebhizinisi ngesiFulentshi; ukuhumusha ukuxhumana kwebhizinisi kusi-French.
IZIFUNDO ZENKOLO - EZIQHELEKILE
Uhlelo lwe-AVS, iSecretarial Study-Legal, lwenzelwe ukuqeqesha abafundi ukuthi basebenze ngunobhala wezomthetho. Imisebenzi eyinhloko kanobhala wezomthetho ukulungisa imibhalo efunwa abameli, abameli noma abanye abantu abasemkhakheni wezomthetho emisebenzini yabo yobungcweti. Futhi, onobhala bezomthetho bavame ukusebenza njengabasizi kubaphathi babo. Babuye bacelwe ukuba benze imisebenzi yobunobhala ejwayelekile ehlanganiswa ohlelweni oluholela kwi-DVS (iDiploma of Vocational Study) eSecretarial Study.
Ababhali abaningi bezomthetho basebenzela amafemu omthetho noma ama-notaries, kanti abanye basebenzela iminyango yezomthetho yezinkampani ezinkulu, komasipala, yohulumeni noma wesifundazwe noma abaphathi noma ama-bailiffs.
Onobhala bezomthetho kumele bakhiqize kakhulu futhi bakwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi, benikezwe ukubaluleka kwemikhawulo yesikhathi kanye nokuphuthuma kwamafayela athile. Njengoba onobhala bezomthetho bevame ukuxhumana namakhasimende, kufanele babe nekhono kakhulu ekuxhumaneni nasekusunguleni ubudlelwano phakathi kwabantu. Njengabasizi, kudingeka ukuthi babone imigomo yokuziphatha efanelekile, ikakhulukazi ekuziphatheni kwabo okuvamile nangokuphathelene nokugcinwa kwemfihlo.
Uhlelo lwe-AVS, iSecretarial Study-Legal, lusiza abafundi ukuthi bakhulise amakhono adingekayo ukwenza lowo msebenzi futhi bakwazi kahle amakhono adingekayo emsebenzini endaweni yezomthetho. Lokhu kuqeqeshwa kubhekisisa wonke amakhono afakiwe kwi-DVS ezifundweni zobunobhala. Ngentshisekelo yokuqhubeka nokuvumelanisa, uhlelo lweSecretarial Studies-Legal lithanda ukutholwa ngunobhala wamakhono.
UKUSIZA KWEMISEBENZI YOKUPHAKATHI KWEMPILO
Isikhungo Sosizo Lokunakekelwa Kwezempilo, esaziwa kangcono ngokuthi, “PAB” préposé aux béneficiaires silungiselela abafundi ukuthi basebenze lapho kuhlala khona umsebenzi wokunakekelwa kwabahlengikazi noma umgcini wokunakekelwa kwasekhaya nokwenza imisebenzi ehlukahlukene ahlukahlukene ngokuya ngokuthi umsebenzi uhlelwe kanjani.
Abahambeli baqinisekisa ukuthi imishini yezokwelapha edingekayo nezinto zokwakha ziyatholakala futhi zigcinwe kahle futhi ziphephile. Ababekhona baqeqeshelwe ukubhekana nezidingo zamakhasimende jikelele, ukubasiza ukunxephezela ukukhubazeka kwabo, ukuqondisa nokubasekela ekugcineni nasekubuyiseleni ukuzimela kwabo nempilo enhle. Lapho benza imisebenzi yabo, izikhonzi zixhumana njalo namakhasimende abo. Basebenza futhi namaqembu asendaweni ukuze benze iziphakamiso futhi babelane ngokubona mayelana nezempilo, ukuziphatha nezidingo zamakhasimende nalabo abasondelene nabo.
Ababekhona bayadingeka ukuthi bazivumelanise ngokuqhubekayo nezimo eziguqukayo, banikezwe ukungazinzi kwamakhasimende, futhi ngenxa yalokho bayadingeka ukuthi bangenelele ngokuqapha kanye nokwahlulela futhi banake ngokukhethekile ushintsho esimweni sempilo samakhasimende. Ababekhona kumele babhekane ngokuphumelelayo nengcindezi, baphenduke nezimo futhi bakwazi ukuzivumelanisa nezimo zekliniki zophiko lokunakekelwa.
Lokhu kuqeqeshwa kulungiselela umfundi ukuba abe ngumsizi wezobuchwephesha ekhemisi, esebenza ngaphansi kokuqashwa kosokhemisi kungaba yindawo yomphakathi noma ekhemisi lasungulwa kwezempilo.
Indima eyinhloko yomsizi wezobuchwepheshe ekhemisi ukusiza osokhemisi ekunikezeni imiyalo, ukugcinwa kanye nokuvuselelwa kwamafayili eziguli kanye nokusabalalisa kanye nokuthengiswa kwemithi kanye nemikhiqizo yemithi. Umsizi wezobuchwepheshe wamakhemisi ulungiselela nemiyalelo engaphansi kokuqashwa kosokhemisi.
Thuthukisa ulwazi, amakhono kanye nezimo zengqondo ezidingekayo zokusebenzisa inhlanzeko, imithetho yezempilo kanye nezokuphepha nezinyathelo ezixhumene nokusetshenziswa kwemikhiqizo ye-caustic ne-corrosive, hlaziya isikhumba nezinwele, welule amaklayenti ukuthi yisiphi isitayela sezinwele esingahambisana nawo, aqonde amasu abandakanyeka ezinweleni Umbala futhi ukwazi ukufeza imisebenzi efana nokusika, ukubeka nokulinganisa izinwele, ukufeza imisebenzi yokuncoma efana nokusika nokuhlikihla noma intshebe, ukuchezuka eceleni kanye namadevu, ukufeza imisebenzi yokwamukela nokuthengisa.
Uhlelo lokuqeqesha abesthetics luhlose ukuqeqesha abesthetists.
Njengengxenye yemisebenzi yabo, onobuhle benza ukunakekelwa kobuhle kumakhasimende ahlukahlukene, ngosizo lwamasu asebenzisa imikhiqizo nezinsizakusebenza ezikhethekile, ngenhloso yokwenza ngcono nokugcina ukubukeka komuntu, futhi lokhu, nakho kukhiqiza inhlalakahle ngokomzimba nangokwengqondo.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, i-esthetician iqoqa imininingwane evela kwikhasimende. Isikhumba, izinzipho nezinwele zomzimba kuhlolwa njengoba kudingeka.
I-esthetician yenza ukunakekelwa okuyisisekelo noma okhethekile ngobuhle, intamo, isifuba, emuva, izandla nezinyawo. I-aesthitician ingafaka ukwakheka komcimbi, futhi ingasusa izinwele ezingxenyeni ezihlukene zomzimba isebenzisa imikhiqizo ekhethekile.
Ngaphezu kwalokho, i-esthetician inikezela ngezinsizakalo zokubonisana, ithengisa amaphakheji wokunakekela, imikhiqizo yezimonyo nezinsizakalo ezenziwe ngabantu. Bahlela futhi bahlele umsebenzi wabo, benze imisebenzi yokwamukela abafundi, baqinisekise ukuthi amaklayenti ayalandelela, enza imisebenzi yokuphatha futhi anakekela indawo yokusebenza nezinto zokwakha. Ama-aestheticians aqinisekisa futhi ukuthi uhlale usesikhathini ekuziqeqesheni kwawo.
ISIKHUMBUZO SE-HAIR (I-ELECTROLYSIS)
Uhlelo lokususa izinwele ulungiselela umuntu ozongenela umsebenzi we-electrolysis noma uchwepheshe wokususa izinwele nge-laser. Lo msebenzi wenziwa emitholampilo yokususa izinwele nezinsimbi zobuhle, noma ochwepheshe bangasebenza ngokuzimela.
Njengengxenye yomsebenzi wabo, ongoti abasusa izinwele bazisa amaklayenti abo ngezinqubo ezahlukahlukene zokususa izinwele futhi basuse izinwele ebusweni, entanyeni noma emzimbeni. Umsebenzi wabo uqukethe ukuthuthukisa ukubukeka komuntu, ukwelapha inkinga yezinwele ezeqile kwesinye isikhathi ngenxa yezimbangela zofuzo noma inkinga ye-endocrine, nokuqinisekisa umuntu onokuphatheka kabi ngokomzimba, futhi lokhu, sonke lesi sikhathi, kukhuthaza umuzwa wokuphila kahle ngokomzimba nangokwengqondo- ukuba.
Uchwepheshe wokususa izinwele uhlola ukuthi iklayenti ilungele ukwelashwa okususa izinwele yini, ibazise ngokuvama okudingekayo, isikhathi, imiphumela elindelekile futhi inikeze izeluleko. Baphinde badlale indima yokwamukela abantu, bathengise imikhiqizo nezinsizakalo futhi benze imisebenzi yokuphatha nsuku zonke ngenkathi begcina indawo yabo nezinto zokwakha.
Lolu hlelo lwenza ukuthi abafundi bakwazi ukwenza umsebenzi wokuzivikela nokulungisa; hlola izimoto ngenhloso yokuhlonza, ukuthola imbangela nomthombo wezinkinga zokusebenza; yenza ukulungiswa, ukushintshwa kwezingxenye nokwenza izinguquko ezinhlelweni ezihlukile zezimoto; sebenzisa izivivinyo; funda izinqubo zokufaka izesekeli nemishini yokuzikhethela; banamathela emithethweni yezempilo, yezokuphepha nemvelo.
Ukuthola iziqu ezidingekayo ukuze ungene emakethe yabasebenzi; ukuthola iziqu ezidingekayo ekuhumusheni amapulani, imininingwane nezinqubo; ukuthola iziqu ezidingekayo ukulungiselela nokulungisa insimbi yensimbi, insimbi engagqwali nezinsimbi ze-aluminium ngokwezinqubo ezihlukile: I-SMAW, i-CTAW, ye-GMAW, ye-FCAW; ukuthola iziqu ezidingekayo ukwenza, ukuguqula nokulungisa imihlangano; ukusebenzisa imithetho yezempilo nokuphepha emsebenzini; ukulawula ikhwalithi yemikhiqizo eyakhiwe.
Funda izisekelo zezinto zokwenza ikhabethe, imishini nokuphepha kanye namasu akhethekile afana nokuthunga nokubaza. Umsebenzi wokwenziwa kwephrojekthi uyinhliziyo yohlelo. Abasebenzi bokufundisa bavela emikhakheni eyahlukene yezimboni, kusuka kwikhabethe yangokwezifiso, ukwakhiwa kwefenisha, ukulungiswa nokubuyiselwa, amasethi amafilimu, kanye ne-aerospace. Abathweswe iziqu zethu basebenza ezitolo ezinkulu nezincane; ukwakha amakhishi, ifenisha yasehhovisi, izindlu zangaphakathi zezentengiselwano; bagqoka amajethi azimele, babuyisele izinto zakudala, baklame ifenisha futhi bafundise abanye.
Uhlelo lweKhabhinethi oluholela kwi-DEP luyinkambo yamahora ayi-1650. Uhlelo losuku (6 hrs / day): cishe izinyanga eziyi-14. Uhlelo lwantambama (ama-5 hrs / kusihlwa): cishe izinyanga eziyi-17.
Ukwenza umfundi akwazi ukuthola ulwazi, amakhono nezimo zengqondo ezidingekayo ukwenza imisebenzi efana nokuqeda ukusetshenziswa nefenisha entsha; ukuxuba imibala ye-opaque, ukusetshenziswa kwama-maphela akhethekile, ukulungiswa kwezindawo ezigcwele izinkuni, ukuthola ulwazi ngemithetho yezempilo nezokuphepha nezinyathelo; ulwazi ngezitayela zefenisha, nokuqala ibhizinisi elincane.
Funda izisekelo zezinto zokwenza ikhabethe, imishini nokuphepha kanye namasu akhethekile afana nokuthunga nokubaza. Lolu hlelo lugxile ezandleni zomsebenzi wephrojekthi. Abasebenzi bokufundisa bavela emikhakheni eyahlukene yezimboni, kusuka kwikhabethe yangokwezifiso, ukwakhiwa kwefenisha, ukulungiswa nokubuyiselwa, amasethi amafilimu, kanye ne-aerospace. Abathweswe iziqu basebenza ezitolo ezinkulu nezincane; ukwakha amakhishi, ifenisha yasehhovisi, izindlu zangaphakathi zezentengiselwano; bagqoka amajethi azimele, babuyisele izinto zakudala, baklame ifenisha futhi bafundise abanye.
Uqede ngempumelelo i-BLI English level 8